Izivakashi Zakho Azifuni Ukufunda Kabanzi noma Funda Kabanzi | Martech Zone
Izivakashi Zakho Azifuni Ukufunda Kabanzi noma Funda Kabanzi
NgoLwesihlanu, Mashi 1, 2013 NgoLwesihlanu, Mashi 1, 2013 Douglas Karr
Izikhathi eziningi, abathengisi bamatasa kakhulu ukuthola ithrafikhi eningi kangangokuthi abachithi sikhathi benza amaphesenti okuguqulwa kwethrafikhi asebevele beyitholile. Kuleli sonto, besibuyekeza i-a Uhlelo lwe-imeyili lokuthinta okuningi weklayenti le-Right On Interactive. Iklayenti lenze imikhankaso ethile emangalisayo kepha lahlushwa amazinga aphansi wokuchofoza nokuguqulwa.
Siqaphele ukuthi i-imeyili ngayinye inezixhumanisi ezifanayo ezazisetshenziselwa ukubuyisela obhalisile kusayithi:
Angiphikisani nokusebenzisa izixhumanisi zombhalo ezinjengalezi, kepha uma zingahlanganiswa namathenda, izinzuzo, izici nomuzwa wokuphuthuma, ngeke zithole ukuchofoza okudingayo. Cabanga uma ngabe lezi zixhumanisi ziguqulwe zaba:
Funda ukuthi amaklayenti ethu afinyelela kanjani ukwanda okuphindwe kathathu ekukhiqizeni. Qala ukubona umkhiqizo ukhuphuka ngebhizinisi lakho manje.
Funda ukuthi ipulatifomu yethu kanjani ihlanganisa kalula ngezicelo zakho zamanje.
Emaminithini we-2, le vidiyo emangalisayo izocacisa ukuthi kungani udinga ukubhalisela namuhla SHINTSHA ukuphila kwakho.
Izihlalo ziyaphela, bhalisela i-demo namuhla futhi thola i-ebook yethu mahhala!
Inzuzo nomuzwa wokuphuthuma kunomthelela omkhulu emazingeni akho wokuchofoza. Ungalahli ithuba nge-imeyili noma i-athikili ukukhuphula amazinga ngokuchofoza. Abantu abafuni Funda kabanzi, Funda kabanzi, ukubukela or ubhalise ngaphandle kokuthi bazi ukuthi kunenzuzo ngokwenza njalo!
Qaphela: Ukungasho ukuthi ukuxhumanisa ngaphakathi lezo zinhlobo zamagama kungukusebenziseka okubi. Ukungeza isixhumanisi ngolimi oluchaza kabanzi kuthuthukisa okuqukethwe kwakho kube ngcono ngezinjini zokusesha.
Tags: Funda kabanziisixhumanisi umbhaloFunda kabanzibukela manje
Imiphumela Yocwaningo lwe-CMO
Mar 2, 2013 ku-12: 41 PM
Njengoba ngifunda lokhu okuthunyelwe, kunesikhangiso seMarkpath esivele sithi “Funda Kabanzi”
Mar 3, 2013 ku-2: 46 PM
Kuhlekisa kakhulu, @robbyslaughter: disqus! Kukhona ithuba lokuthuthukisa leyo CTA. Ekuzivikeleni kwabo, ngicabanga ukuthi kunenzuzo eyodwa lapho - 'kulula'.